Onye isi ala Şahin na-enyocha ihe ndị a na -eme na mpụpụ Ọrịa Coronary | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyAla nke Anatolia Region27 GaziantepOnye isi ala Şahin na-enyocha ihe ndị a na-eme na mpụga nje virus na-efe efe
31 / 03 / 2020 27 Gaziantep, ụgbọ okporo ígwè, Ala nke Anatolia Region, General, KENSİÇİ Rail Systems, Isi akụkọ, Turkey, tram
Onye isi ala nyochara ihe megide ọrịa ọrịa sahron coronavirus
Onye isi obodo Rome Gaziantep Fatma Şahin nyochara ihe ndị otu obodo ukwu ahụ megidere ntiwapụ Corona Virus (COVID-19) na saịtị ahụ.
Ọ pụta n'obodo Wuhan Ndị mmadụ Republic of China na ụwa na e ji megide ebe n'okpuru nduzi nke sıklaştırılıy Turkey Corona Virus. Obodo ukwu, nke na-enye mgbochi na nkwado mmekọrịta na mgba nke mba, na-aga n'ihu na-arụ ọrụ ya. Fatma Şahin, onye isi obodo ukwu na-elekọta ọrụ na usoro ndị otu ya na ndị otu ya mere. O gere ndị obodo ahụ ntị.
Na otu, n'ụbọchị mbụ nke virus hụrụ na Turkey kemgbe arọ Mesa ewe President Fatma Sahin, bịara hụ na-achị ha na-arụ ọrụ. Trolleybus na bọs na-akwụsị ile ndị yiri agụ nkwọ, okirikiri nyere site Ministry of Interior na ọha iga ugbo ala etinyere maka oge mbụ na Turkey gwara ụmụ amaala na-elekọta mmadụ anya iyipu ihe njem. Ọ mekwara ihe ma rụọ ọrụ megide ọrịa Corona. Maazị Şahin kwuru na ndị mmadụ kwesịrị ịma ma mee ihe n'okwu a. Ya na ndị otu ndị uwe ojii ji njikwa akara aka na azụmaahịa. Ọ lere anya ma a na-agbaso iwu okirikiri. Ọ gafere n'ụlọ akụ nri, ọ hụrụ igbe akwadebere na ọnọdụ ọhụụ ebe ahụ
N’aka nke ọzọ, Onye isi ala Şahin kesara ụmụ amaala ọcha na ncha.
A na - eme Coronavirus na Transportgbọ njem mba ofesi
President Sahin nke e si France nweta banyere mbipụta nke tram bụ ihe siri ike
Onye isi oche Şahin, Asarcık'ta Road Works Examined
Mayor Şahin: 'Ọdọ Karşıkaya Ga-akwụsị Ozugbo O kwere omume'
Ọrịa Coronary Ọhụrụ a ga-eme na saịtị owuwu
Ezipụ Ọrịa Nje Virus Coronary si na Ministri zigara ndị gọvanọ 81 nke mpaghara
Ekwuputara Oge Egosiwu na Istanbul N’etiti oke nke Coronavirus
Coronavirus Ramadan Tụtara!
Kpọtụrụ fatma ozugbo
Gaziantep tram na-akwụsị
Ibe Ibe Onwu
Egwuregwu Ndị A Na - emegide Mmetụta Ọrịa Na - akpata na Eskisehir (Video)
Kedu mgbanwe enwere ike inwe mgbe ana - akpochapu ihe omumu Coronavirus?